အခု Facebook ကသင့်ရဲ့ SMS / MMS ကိုလည်းဖတ်နိုင်ပြီဆိုတာသင်သိပါသလား။ | Linux မှ
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | applications များ, အခြား
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသုံးပြုခြင်း၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုနှင့်ဆွေးနွေးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ သူကကျွန်တော့်ကိုပြောတာကသူတို့အားလုံးဟာအကောင်းအဆိုးတွေပဲ၊ ဘယ်သူမှဆိုးကျိုးမရှိဘူး၊ Facebook ကငါတို့ရဲ့ရင်းနှီးမှုနဲ့သီးသန့်တည်ရှိမှုကိုချိုးဖောက်တယ်၊ ဒါကယုံကြည်တာထက်အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်တယ်လို့ငါပြန်ပြောလိုက်တယ်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏နံရံပေါ်တွင်တင်ထားသောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးသာမကကျွန်ုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့သည့်နေရာများ၏ပထဝီအနေအထားကိုလည်းပါဖော်ပြထားသည်။ ငါတို့ Instagram မှာအရင်ကထုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေ၊ အခု WhatsApp မှာရှိတဲ့အချက်အလက်တွေအားလုံးကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် chats နှင့်အခြားအရာများကဲ့သို့သောအချက်အလက်များစွာအပြင် ... သို့သော်၎င်းသည်၎င်းတို့အတွက်မလုံလောက်ပါ၊ ယခု Facebook သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ SMS ၏အကြောင်းအရာများကိုဖတ်လိုသည်။
လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကမှ FromAndroid.net တွင်ကျွန်ုပ်ဖတ်ပြီးပါပြီ (လူအများသတိထားမိစေရန်ဤတွင်မျှဝေလိုပါသည်) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်း Alain ၏ပြောကြားချက်အရ Android အတွက် Facebook application သစ် (အခမဲ့လျှောက်လွှာ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာဘာကောင်းတာလဲ။ …¬_¬) ယခုအပလီကေးရှင်းသည် Android စက်နှင့်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက်တွင်ရရှိမည့်ခွင့်ပြုချက်အသစ်များကိုအတည်ပြုရန်သို့မဟုတ်လက်ခံရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတောင်းသည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်၎င်း (အက်ပလီကေးရှင်း) နှင့်ပိုင်ရှင်များ (ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်) တို့ကကျွန်ုပ်တို့၏ SMS ကိုဖတ်ရှုနိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းအတည်ပြုရန်လိုသည်။ နှင့် MMS များ
FromAndroid.net မှ Alain ၏ဆောင်းပါးမှဓာတ်ပုံ
ဓာတ်ပုံထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း၊ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအတည်ပြုဖို့စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ခွင့်ပြုချက်အသစ်တွေပါ။ ဤသည်မှာပထမ ဦး ဆုံးအသုံးပြုသူတစ် ဦး မှဖော်ပြခဲ့သည် Redditထို့အပြင်သုံးစွဲသူများစွာ၏မှတ်ချက်များက Facebook ၏ Android အက်ပလီကေးရှင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ SMS ကိုဖတ်နိုင်ပြီဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းခံခြင်းမရှိသေးသည့်အတွက်ယခုမည်သည့်တရားစွဲဆိုမှုသို့မဟုတ်အရှုပ်တော်ပုံကိုမဆိုရှောင်ရှားရန်တောင်းဆိုနေကြသည်။
ကျွန်တော်တို့ Facebook အကြောင်းသိသမျှအရာအားလုံးကိုပြန်လည်ကြည့်ကြရအောင်။
သူတို့ဟာ Instagram ကိုဝယ်ပြီးကတည်းကသူတို့မှာ Instagram မှာထားခဲ့သမျှအားလုံးပြီးပြီ
WhatsApp ကို ၀ ယ်လိုက်ပြီဆိုတော့သူတို့ဆီမှာဘယ်သူ့နဲ့မှငါတို့ပြောသမျှအရာအားလုံးရှိနေပြီ
ယခုငါတွေးမိ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏ SMS ကိုဖတ်ရန်လိုသလား။ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Facebook Facebook Facebook သည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုကျွန်ုပ်၏မိခင်ထက် ပို၍ သိကျွမ်းလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ data များကို third party ၀ က်ဘ်ဆိုက်များသို့မျှဝေရန်မလိုတော့ပါ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမည်သို့ကူညီရမည်၊ လမ်းပြနိုင်သည် Facebook ထဲကိုဝင်ပါ၏သူတို့အားအပြင် Facebook က သူတို့ပြီးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာများလွန်းရှိသည်။
သူတို့ပေးမည့် SMS ကိုဖတ်ရန်အတွက်အကြောင်းပြချက်မှာ -
SMS မှတစ်ဆင့်အတည်ပြုကုဒ်များကို scan ဖတ်ရန်သင်၏ SMS နှင့် MMS အားလုံးကိုဖတ်ရန်ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။
တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်သူတို့ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြုမူကြလိမ့်မယ်၊ သူတို့ဟာလူကောင်းတွေဖြစ်မယ်၊ SMS / MMS တွေအားလုံးကိုဖတ်နိုင်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် nah၊ သူတို့စိတ်မ ၀ င်စားဘူး၊ သူတို့ကအတည်ပြုလက်မှတ်ကိုသာဖတ်မယ်၊ မဖတ်ဘူး ... ¬¬
အကယ်၍ သင်သည် Facebook အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသင်၏ Android ကိရိယာတွင် PlayGoogle မှတဆင့်ရရှိနိုင်သည့်၎င်းတို့၏တရားဝင်လျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုပါကသင်၏ SMS ကိုကြည့်ရှုရန်ပြproblemsနာမရှိပါ၊ ဘာမှဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ၊ သင်၎င်းကိုဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်သင်သည်သင်၏ Facebook အကြောင်းသင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုရယူလိုလျှင်သင်ကဲ့သို့သောအခြား application အချို့ကိုသုံးနိုင်သည် လျင်မြန်စွာ.
စကားမစပ်, လျှောက်လွှာရဲ့ခွင့်ပြုချက်၏ကျန်, အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည် ... ရယ်စရာကောင်းတဲ့နှင့်ကြောက်စရာဖြစ်ပါတယ်။ အို_O ။ အသံနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်၊ မည်သည့် Wi-Fi မှမချိတ်ဆက်နိုင်၊ ပြက္ခဒိန်ဖြစ်ရပ်များကိုထည့်ပေါင်းခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ၎င်းကိုသတိပြုပါ။ ကျွန်ုပ်၏အတည်ပြုချက်သို့မဟုတ်အတည်ပြုချက်မလိုပဲအခြားသူများထံအီးမေးလ်များပို့နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဆက်အသွယ်များကိုလည်းပြုပြင်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်တမ်း၊ ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်း၊ စသဖြင့်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ လာပါ၊ ယနေ့အစိုးရသူလျှိုများအလုပ်မဖြစ်တော့ကြောင်း၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည်ယနေ့တည်ရှိနေသောအကောင်းဆုံးသူလျှိုဖြစ်သည်။ ငါခွင့်ပြုချက်၏မျက်နှာပြင်တစ်ခုစွန့်ခွာ:
ယခုအချိန်တွင်သင်ရေးသူသည်မကြာခဏ Facebook အသုံးပြုသူမဟုတ်ပါ၊ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်သည်သင်၏ chat မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်သည် online ဖြစ်သည် pidgin ကို, ဒါပေမယ့်ငါ့နံရံပေါ်မှာအရာတွေကိုဝေမျှဖို့ငါမအများကြီး။ ကျွန်ုပ်တွင် FirefoxOS ပါသည့် ZTE လည်းရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အဓိကစနစ်အနေဖြင့် Android ကိုကျွန်ုပ်မသုံးပါ။ (အသုံးပြုရန်လည်းမရည်ရွယ်ပါ။ ) ဂူးဂဲလ်နှင့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှစ်ခုလုံးသည်ကျွန်ုပ်၏ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်မှု၏သူတော်စင်များမဟုတ်ပါ။
FromAndroid.net မှ Alain အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒီခွင့်ပြုချက်အသစ်အကြောင်းသင်သိပါသလား။ ... သူတို့ကိုသင်သဘောတူသလား
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » အခု Facebook ကသင့်ရဲ့ SMS / MMS ကိုလည်းဖတ်နိုင်ပြီဆိုတာသင်သိပါသလား။
၎င်းသည်သူတို့စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်ပမာဏနှင့်၎င်းသည်မည်သည့်အခါမှကြီးထွားမှုရပ်တန့်သွားသည်ကိုကြောက်သည်။ ငါတို့လိုချင်သည်ဖြစ်စေ၊ မလိုသည်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည်လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုဖြစ်လာသည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုအများဆုံးစိုးရိမ်စေသည်။
သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုလူမှုရေးကွန်ယက်တွေ၊ ဒါပေမယ့်လူတိုင်းကသူတို့လိုချင်သလောက်ဒေတာကိုထုတ်ပေးတယ်၊ ငါထွက်မသွားချင်ဘူး။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အမှန်ပါပဲ၊ ပြtheနာကလက်ဝါးကြီးအုပ်ချုပ်ကိုင်မှုဖြစ်လာတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါထင်တာကသူဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်၊ သတင်းအချက်အလက်ဘယ်လိုစုဆောင်းတယ်ဆိုတာဟာအာရုံနဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုဖန်တီးရာမှာကောင်းမွန်တဲ့ကိရိယာတစ်ခုလို့ထင်တယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒါကိုကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့အသုံးပြုဖို့လိုတယ်၊
ငါထင်သည်မှာပြtheနာသည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်မဟုတ်ဘဲ၎င်းတို့သည်အသုံးဝင်သော်လည်းသင်၏ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများတွင်လူတစ် ဦး အနေနှင့်သင်ပြုမူပုံ - သင်၏ထင်မြင်ချက်များ၊ အကြိုက်များ၊ ထိုကဲ့သို့စာမျက်နှာများသို့အကြိမ်ကြိမ်လည်ပတ်မှုအကြိမ်ရေ၊ login အချိန်နှင့်ကြာချိန် (နှင့်ဖြစ်ကောင်းကဖန်ဆင်းခဲ့သည်ဘယ်မှာမှ), ယခုငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်ဘူးသောအခြားအမှုအရာတို့တွင်။
တနည်းအားဖြင့် Facebook သည်အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင်လူသားများ၏အပြုအမူနှင့်ပတ်သက်သောကိန်းဂဏန်းများပြုလုပ်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းဖြင့်အသုံးပြုပါက၎င်းကိုကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ သူသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းနှင့်အခွန်ပေးဆောင်ခြင်းအကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်းကြောင်းကိုသိရန်ဘုရားသခင်အတွက်အရာများအနည်းငယ်သာရှိသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်အာရုံစိုက်ခြင်းအားဖြင့်၊ ကျင့် ၀ တ်ကောင်းကောင်း၊ ကျင့် ၀ တ်ကောင်းကောင်းဖြင့်ကျင့်သုံးပါက၎င်းအား ဦး တည်နေသည့်လမ်းကြောင်းအပေါ်အားလုံးသဘောတူမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ သို့သော်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလွယ်ကူစွာငွေရှာရန်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုအနည်းငယ်လွှမ်းမိုးနိုင်ရန်နည်းလမ်းသစ်များကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၌မေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်။ google hangouts တွင်သင့်တွင် sms ကိုလည်းသင်သုံးနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ထားရှိသော setting တွင်သင် sms ကိုသင်မြင်နိုင် ဦး မည်လော။
ပုံမှန်အားဖြင့်, ဟုတ်ကဲ့, သူက WhatsApp ကို (သင်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုပို့ချင်သောအခါ, သူကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်ပုံပေါ်) ကဲ့သို့တူညီသောလမ်းတူနီးပါးလုပ်ဆောင်သည်။
ဤအချိန်အတောအတွင်းကျွန်ုပ်သည် Telegram (နှင့် WhatsApp ကို အသုံးပြု၍ တယ်လီဂရမ်နှင့် / သို့မဟုတ် Kontalk အတွက်လက်ငင်းစာတိုပေးပို့စနစ်အားစွန့်ရန်တွန့်ဆုတ်နေသောအသိအကျွမ်းများအတွက်အသုံးပြုလိမ့်မည်) ။
သတင်းဆိုး။ Telegram သည်အမှောင်ဘက်သို့လှည့်လာပြီးယခုအခါတွင် SMS ထိန်းချုပ်မှုအပါအဝင်ခွင့်ပြုချက်များစွာတောင်းခံသည်။
သူတို့မှာလုပ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာသူတို့လုပ်မယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ sms အားလုံးကိုဖတ်ဖို့ ၀ န်ထမ်းတွေမလုံလောက်ဘူး၊ ယုတ္တိရှိတယ်။
အချိန်ကြာမြင့်စွာ (ဖိုင်များ၊ ရုပ်ပုံများ၊ စာဖြင့်ရေးသားထားသောသို့မဟုတ်ပြောဆိုသောစကားဝိုင်းများ) ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုကွန်ပျူတာမှပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ လူ့စိတ်ဝင်စားမှုသည်၎င်းတို့စိတ်ဝင်စားသောဘာသာရပ်များမှမှားယွင်းသောလက္ခဏာများကိုခွဲခြားရန်လိုအပ်မှသာဝင်ရောက်သည်။
ကွန်ပျူတာများသည်အချို့သောအရာများကိုသာရှာဖွေသည်၊ ၎င်းတို့သည်အရာရာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ မရပေ။
၎င်းကိုပြုလုပ်သောနည်းပညာ (ဥပမာ - ဂူဂဲလ်) တည်ရှိပြီး၎င်းကိုထိုနည်းအတိုင်းပင်အသုံးပြုကြောင်းသက်သေပြသည် (အမေဇုံကတိကျသောစာအုပ်များကိုဖျက်ပစ်သောအခါ၊ အက်ပဲလ်ကအီးမေးလ်များကိုပယ်ဖျက်သည့်အခါ၊ ပေါ်လာသောတရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ရှည်လျားသောစသည်တို့) ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့ဟာရိုးရိုးရှင်းရှင်းရှာတဲ့အရာတွေကိုရှာကြတာ၊ မင်းရည်းစားကိုမင်းပြောခဲ့တာတွေကိုမင်းမယုံဘူး။
pandev, ငါကိုယ်တိုင် မှလွဲ၍ အခြားသူ (ok, ငါ့ရည်းစား…) သည်ကျွန်ုပ်၏ SMS ကိုထိုကဲ့သို့ဖတ်နိုင်သည်ဟူသောစိတ်ကူးကိုကျွန်ုပ်မကြိုက်ပါ။ ငါသူတို့ကိုမဖတ်တော့ရင်တောင်အဲဒါကိုလုပ်နိုင်တာဆိုတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့အချက်ကိုတော့ငါမကြိုက်ဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေးများနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်များကိုခုခံကာကွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့ကို ဦး စွာသိပြီးတန်ဖိုးထားရမည်ကိုသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် gara, ပိုသောနေရာများသင်ထင်ထက်လုပ်ပါ, ဒါကြောင့်အဖြေမရှိ။
ငါ Facebook အတွက် Tinfoil ကိုဝတ်ထားပြီ
CM 7.2 ဖြင့်တရားဝင် Android အတွက် Flipster အတွက် Facebook ကိုသုံးပါတယ်။ (တရားဝင်လျှောက်လွှာကအရမ်းကိုကြီးလွန်းတယ်၊ အဲဒါကိုဖွင့်ချင်ရင်ကံမကောင်းတာမဖွင့်ဘူး)
တရားဝင် Ask.fm အက်ပလီကေးရှင်းနှင့် VKontakte တို့က Android အတွက်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ထက်ပိုမိုပေါ့ပါးသည် (စကားမစပ်၊ MIDlet ထုတ်ကုန်များအတွက်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည်၎င်း၏ Android နှိုင်းယှဉ်မှုအရပိုမိုကောင်းမွန်သည်)
ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုက encryption ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ် Encryp Facebook ကိုရှာသည်။ ၎င်းသည်နံရံပေါ်ရှိစာများကို encrypt လုပ်သည်။ မကောင်းသည်မှာကျွန်ုပ်သည် chat အတွက်ထိုကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုရှာမတွေ့နိုင်ပါက၊ အကယ်၍ တစ်စုံတစ် ဦး ကအဖြေများ (သို့) applications များ encrypt လုပ်နိုင်သည်ကိုသိလျှင်။ WhatsApp နှင့် Facebook တို့အတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသူတို့အဖြေကောင်းကောင်းပေးနိုင်လိမ့်မည်။ ငါဆက်ရှာမယ်
ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါပေမယ့်ဒါကမင်းကိုဘာအသုံးချတာလဲ။ ကောင်းမွန်သော encryption စနစ်ဖြင့် (သတိထားပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းအကြောင်းအနည်းငယ်သာသိသောကြောင့်) သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိအကြောင်းအရာများကိုစာဝှက်ပေးသည့် application တစ်ခုရှိသင့်ပြီး၎င်းသည်လက်ခံသူဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တူညီသောလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာနှင့်အတူ၎င်းကိုအထူးသော့ချက်အချို့ဖြင့်၎င်းကိုစာဝှက်ဖြည်နိုင်သည်။
Facebook နံရံပေါ်မှာရေးတာကမင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ၊ ဒါကြောင့် encryption လုပ်ပုံကိုငါနားမလည်ဘူး။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုကရှင်းပြနိုင်လျှင်ငါတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်။
ဒီတော့အထူးသော့ကိုသင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်ဝေမျှသည်ဒါကြောင့်၎င်းကို၎င်းကို decode လုပ်နိူင်သည်။ သူတို့၏တိုးချဲ့မှုတွင်သော့ကိုတပ်ဆင်ခြင်းမပြုသောသူများအတွက်aeipu348di49pcñ9u3p9g349gp49နှင့်ဆင်တူသည့်အရာတစ်ခုကိုမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကရိုးရှင်းသောတေးဂီတဖွင့်စက်ကိုတပ်ဆင်လို။ ကျွန်ုပ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့်ဖုန်းစာအုပ်တောင်မှ ၀ င်ရန်ခွင့်ပြုချက်ကိုပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ခဲ့သည်။
ထူးဆန်းသည်မှာသင်သည်အချို့သောဝိသေသလက္ခဏာများရှိသောကစားသမားတစ် ဦး ကိုရှာဖွေနေစဉ်စာရင်း၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသည်။
ငါထင်တာကအသံပလေယာတွင်ခေါ်ဆိုမှုများ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုများသောအားဖြင့်အသုံးပြုသည်၊ ထို့ကြောင့်တေးဂီတဖွင့်နေစဉ်အဝင်ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုစတင်သောအခါ၎င်းသည်သီချင်းအလိုအလျောက်ခေတ္တရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်။ တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုဆုံးမမယ်ဆိုတာငါတကယ်မသိဘူး
ငါအမှန်အကန်ပြောရရင်၊ ဒီခွင့်ပြုချက်ကိုမတောင်းဘဲအခြားဖုန်းကစားသူတစ် ဦး ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်များနှင့်အစီအစဉ်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
KZKG ^ Gaara ... Facebook သို့မဟုတ် WhatsApp ကိုသုံးသောသူများသည် Facebook ကိုဖတ်ရန်စိတ်ဝင်စားသည်ဟုထင်ပါသလား ... Facebook သို့မဟုတ် WhatsApp ၏သာမန်အသုံးပြုသူသည်လွပ်လပ်လွ
“ …ငါ့မှာဖုံးကွယ်စရာဘာမှမရှိဘူး၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အမှတ်တရစကားပြောဖို့၊ ပါတီပွဲတွေလုပ်ဖို့ Wass ကိုသုံးတယ်။ »
အင်တာနက်ပေါ်ရှိ privacy နှင့်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဝဲများအကြောင်းပြောသောအခါ၎င်းသည်သာမန်အသုံးပြုသူများထံမှအများဆုံးကြားရသောစကားစုဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သူတို့ကအဲဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုရင် XD ကသူတို့ဟာ XD အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများလို့ထင်သလား။
ကောင်းပြီ၊ သူတို့ဟာသင်ရေးသားတဲ့စာတိုင်းကိုသေချာပေါက်ဖတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့အဲဒီသတင်းအချက်အလက်ကိုတစ်ခုခုအတွက်သုံးမှာသေချာတယ်၊ ဥပမာသင်မိတ်ဆွေတစ် ဦး ကိုသင်လိုချင်သည့်အရာနှင့်ထိုအရာမျိုးကိုလူသိရှင်ကြားဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။ ယခုသူတို့၏ privacy ကိုဂရုစိုက်သူတိုင်းကျွန်ုပ်သည်ဥပမာအားဖြင့်ဤအက်ပလီကေးရှင်းအမျိုးအစားမှတဆင့်အလွန်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများကိုမျှဝေရန်မကြိုးစားပါ
လူများသည် Diaspora၊ Pump.io ကဲ့သို့သောဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကင်းသောလူမှုကွန်ယက်များဖြစ်သည့် XMPP, SIP ကဲ့သို့ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကင်းမဲ့သောမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းနှင့်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုကွန်ယက်များသို့ပြောင်းရန်နှင့်လက်ဝါးကြီးအုပ်ပြီးနောက်လိုက်ပြီး“ ကွန်ယက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအဆုံးသတ်သောသိုးများ” အဖြစ်ဆက်လက်မတည်ရှိရန် ငါ့သူငယ်ချင်းများအားလုံးသိမ်းပိုက်လိုက်သည် ... », « ... ငါဖုံးကွယ်စရာဘာမှမရှိဘူး ... »
အဲဒီ update ကလွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကငါ့ဆီရောက်လာတယ်။ ငါ update မလုပ်ပဲအဲဒီအချိန်တုန်းက app ကို uninstall လုပ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ကျွန်ုပ်သိရှိခဲ့ရာများမှလူအများစုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိဟုထင်ပါသည်။
သင်၏ sms ကိုဖတ်ခွင့်? သင့်ရဲ့ပြက္ခဒိန်ကိုပြုပြင်မွမ်းမံရန်ခွင့်ပြု? သင့်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုပြုပြင်မွမ်းမံရန်ခွင့်ပြု? wifi တစ်ခုမှချိတ်ဆက်ရန် / ဖြတ်တောက်ရန်ခွင့်ပြုချက်?
ငါယုံကြည်ဖို့အရမ်းခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုရှာတယ်။ အကယ်လို့ Facebook ကဒီလိုလုပ်ရပ်တွေကိုလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုချက်တောင်းတယ်ဆိုရင်လူမှုရေးကွန်ရက်အတွက်လုံးဝယုတ္တိမရှိဘူး၊ လူမှုရေးကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်တာဟာတခြားအရာတစ်ခုအတွက်ဖုံးလွှမ်းရုံသက်သက်ပဲလို့ငါထင်တယ်။ အားလုံးကြောင်းမအဓိပ္ပာယ်ကို။
ကောင်းသောအရာငါကြောင်း shit မသုံးပါ။
ငါနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမပြproblemနာရှိသည်။ ခရစ်စမတ်မတိုင်ခင်ကတည်းကငါဖေ့စ်ဘုတ်ကိုမ ၀ င်တော့ဘူး။ မင်းကငါ့ဆီကယူထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကြောင့်မဟုတ်ဘဲမင်းရဲ့အဆက်အသွယ်တွေကြောင့်ပါ။ မင်းမှာမင်းလိုတာထက်ပိုပြီးသင့်ကိုသတိထားမိမယ်ဆိုရင်စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတယ်ဆိုရင်၊ သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုသူတို့ရဲ့စာပေတွေနဲ့အတူကြည့်ရှုနိုင်တယ်။ ပုံမှန်သူငယ်ချင်းများကကျွန်ုပ်ကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြည့်ရှုသည်သို့မဟုတ်“ ဒါဟာမိုက်မဲတယ်” ဟုပြောသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုယ်ကိုအလောင်းအစားပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်မဝင်ခဲ့ပါ။
မကောင်းတဲ့အရာကတစ်ခါတလေမှာငါ xD အချိန်အများကြီးများတယ်
ကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကတော့ငါအမြဲတမ်းအသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်တစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်တဲ့အခါ (သို့) ဘယ်နေရာမှာမဆိုမှတ်ပုံတင်တဲ့အခါလိမ်ပြောခြင်းပဲ။
ဖေ့စ်ဘွတ်ကကျွန်တော့်နာမည်အမှန်ကိုမသိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်၊ ကျွန်ုပ်၏လိပ်စာ၊ ကျွန်ုပ်၏တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များနှင့်လည်း na de na မပါပါ။ ကျွန်ုပ်၏အချက်အလက်အားလုံးသည်ယူရိုငွေတစ်ထောင်ထက်ပိုမှားသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏တည်နေရာကိုသိသာစွာသိရှိနိုင်ပြီး၎င်းသည်ကာကွယ်ရန်ခဲယဉ်းသော်လည်းအခြားမည်သည့်အရာမျှမရှိသည့်လူတစ် ဦး ၏တည်နေရာကိုသူတို့သိလိမ့်မည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ဒီဟာကသင့်ကိုနည်းနည်းလေးကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်လို့ဘဝမှာသင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူများနှင့်ဆက်သွယ်မှုရှိလျှင်၊ သင်လုံးဝအမည်ဝှက်မည်မဟုတ်ပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ Joaquínမင်၊ ကျွန်ုပ်ဘယ်လိုဆက်သွယ်မှုနှင့်မည်သူနှင့်ဆက်သွယ်နေသည်ကိုသိခြင်းကကျွန်ုပ်ကိုစိတ်မပူပါနဲ့။ ဒါပေမယ့်အဓိကအချက်ကမင်းသူတို့ကိုမင်းရဲ့စစ်မှန်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုမင်းပေးရင်မင်းသူတို့မှာရှိပြီးသား (၁) လိုချင်ရင်၊ သူတို့လိုချင်တဲ့ခံစားချက်ရှိရင်၊ ၁၀ ကိုငါအလောင်းအစား ၁၀ ကိုအလောင်းအစားဖြစ်တယ်၊ ။
Facebook အနေဖြင့် Mirlo မရှိကြောင်း၊ အခွန်မပေးကြောင်း၊ လူမှုလုံခြုံရေးနံပါတ်စသည်တို့ကိုဖေ့စ်ဘွတ်မှသိသည်မှာကျွန်ုပ်အတွက်သိပ်အရေးမကြီးပါ။ သူဟာ Esquonceda ရဲ့ Becquer ရဲ့ကဗျာကိုပိုနှစ်သက်တယ်။
ငါထပ်ခါတလဲလဲ, သင်၏စစ်မှန်တဲ့ data တွေကိုပေးခြင်းဘယ်တော့မှသင်၏ privacy ကိုထိန်းသိမ်းရန်ကောင်းတစ် ဦး အတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်။
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်ကိုများစွာတပ်ဆင်ရန်ခွင့်မပြုသည့်ရိုးရှင်းသော Huawei ဖုန်းသည် FB သည်အလိုအပ်ဆုံးသောအမျိုးအစားတွင်မပါဝင်ပါ။
ဒါပေမယ့်တစ်စုံတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ရင်၊ wasapp ကို install လုပ်တဲ့အခါ၊ ငါ xD ကိုကောင်းကောင်းမရေးတော့ဘူး၊ sms ကရောက်လာမယ့်ကုဒ်တစ်ခုကိုတောင်းတယ်၊ ပြီးတော့ခင်ဗျားဘယ်လိုထင်သလဲ၊ အဲဒါဘာလဲဆိုတာသိပြီးမှတ်ပုံတင်ကိုအလိုအလျောက်အဆုံးသတ်လိုက်တယ်။
ဒီနည်းနဲ့ငါပြောခဲ့တာက FB အက်ပလီကေးရှင်းမဟုတ်ရင်အခုသူတို့မှာ Android ဖုန်းအားလုံးနီးပါးမှာအရာအားလုံးကိုရယူနိုင်ပြီလို့ထင်တယ်။
ထုံးစံအတိုင်းရိုးရှင်းသော rom ဖြင့်ခွင့်ပြုချက်များကိုသင်တတ်နိုင်သမျှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။ beanstalk, hox ။ http://uppix.com/f-face531f93fa0015b6fc.jpg
ပြpermissionနာက Android ခွင့်ပြုချက်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်မှာပိုရှိတယ်။ iOS တွင် facebook app များစွာပါ ၀ င်သော်လည်းအသုံးပြုသူမှ system settings အပိုင်း (အထူးသဖြင့် privacy နှင့်ပတ်သက်သော) မှတစ်ဆင့်ခွင့်ပြုချက်များကိုပြင်ဆင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဖုန်းအဆင့်တွင် filter ကိုမခြေရာခံခြင်းလည်းရှိသည်။ အပလီကေးရှင်းတစ်ခုသည်ခွင့်ပြုချက်ကိုအလိုအလျောက်ဖွင့်လိုသည့်အခါတိုင်း၎င်းစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်သော်လည်း၎င်းကိုတပ်ဆင်သောအခါအသက်ဝင်ခြင်းမရှိသည့်အခါတိုင်းသင့်အားအမြဲတမ်းအသိပေးလိမ့်မည်။ အခြား operating system များ (firefoxOS) ကဲ့သို့သောအရာများမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ သို့သော်အနည်းဆုံး Android တွင်အားနည်းချက်မှာ (ဥပမာအားဖြင့်သာဓကပြရန်အတွက် iOS နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း) ဖြစ်ပါသည်။
အလွန်ကောင်းသောအချက်။ တချို့ကဘာကြောင့် iPhone လိုချင်ရတာလဲဆိုတာကိုအခုကျွန်တော်နားလည်ပါပြီ။ iPhone5/ 5S / 5C ကစျေးကြီးလွန်းလို့ iPod Touch5ကိုပိုနှစ်သက်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ယခင်ထင်မြင်ချက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အရာများအပါအ ၀ င် android နှင့်ပတ်သက်သောကိုင်တွယ်သောတိုးတက်လာသောသီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်လုံခြုံရေးပြofနာများကြောင့် (ကျွန်ုပ်အရင်ကပြုလုပ်ခဲ့သောပလက်ဖောင်း) ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် iPhone သို့အတိအကျပြောင်းလဲခဲ့သည်။
အိုင်ဖုန်းလား။ … Apple မှလား။ အို_O
yeah @ KZKG ^ Gaara hehe ။ အစပိုင်းမှာလည်းအံ့အားသင့်ခဲ့မိတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကမင်းကိုအာမခံထားတာကတခြားဟာတွေထက်ပိုပြီးလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ် (လုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ဖို့) ။ ကျွန်ုပ်၏ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ အခြားအချက်များအနက် - ဤအချက်ကိုအပြည့်အဝရှင်းပြပါ။
Firefox OS ရှိ privacy၊ လုံခြုံရေး၊ လျှောက်လွှာခွင့်ပြုချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သူမဆိုမှတ်ချက်ပေးနိုင်ပါသလား။
ernesto moreno sifuentes ဟုသူကပြောသည်
Big Brother သည်levelsရာမအဆင့်ဆင့်သို့ရောက်ရှိနေသည်။ လူမှုကွန်ယက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များကိုထိန်းချုပ်လိမ့်မည်ဟုဘယ်သူထင်လိမ့်မည်နည်း။
ernesto moreno sifuentes သို့ပြန်သွားပါ
ကောင်းသော .. ပထမ ဦး စွာငါ desdelinux နှင့်သူ၏ယောက်ျားများထံတောင်းဆိုမှုတစ်ခုပြုလုပ်တော့မည်။ သင်သည်အီးမေးလ်တစ်စောင်ရေးရန်လိုအပ်ချက်ကိုဖယ်ထုတ်နိုင်ပါသလား။ ခင်ဗျားလုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Suegundo - ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရည်မှန်းချက်နှစ်နှစ်တာ -
မက်ဆေ့ခ်ျများ .. စိတ်ကူးများ .. ဆွေးနွေးပွဲများ .. စီမံကိန်းများ၊ အရာအားလုံးရေးသားခဲ့သည်နှင့်အတိတ်၌တည်၏။ ဆိုလိုသည်မှာ - မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမှကြိုတင်ကတိမတည်ပါ။ Facebook ထောင်ချောက်သည်လူများသည် Facebook ကိုနောက်ဥပမာတစ်ခုသို့ကျော်လွှားခြင်းမပြုဘဲလိုက်နာခြင်းဖြစ်သည်။ အစစ်အမှန်လူ့အဖွဲ့အစည်း !! အသိုင်းအဝိုင်းဖန်တီးခြင်း။
Facebook (သင်၊ ယောက်ျားများ) ကိုကျွန်ုပ်နှင့်အတူသယ်ဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကောင်းမွန်သောအဖွဲ့ ၀ င်များဖြစ်ခြင်းအတွက်ပိုမိုကောင်းသောအကြောင်းပြချက်များဖြင့် Facebook ကိုအသုံးပြုသူများသည် virtual reality ကိုကျော်လွှားနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ wifi အနီးရှိကုလားထိုင်တွင်ဆက်လက်ထိုင်နေကြသည်။ ငါငြီးငွေ့လာတယ်။ ငါမသုံးတော့ဘူး။
ငါတစ်ခုခုလုပ်ဖို့စီမံတဲ့အခါငါလူသိရှင်ကြားရန်သာအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ပြီးတော့ငါတစ်ယောက်တည်းလုပ်ရမယ်၊ ဝါးလိုက်ပြီးကယ်မယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယ်သူကမှနည်းပညာအကြောင်းအချည်းနှီးပြောဆိုခြင်း၊ အပြုသဘောဆောင်တဲ့မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ပြက်လုံးများကိုပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်စျေး ၀ ယ်စင်တာတစ်ခုမှာအဆင်ပြေဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ဆန္ဒကိုကျော်လွှားချင်ဟန်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ .. ဒီအတွက် NSA သည်ကျွန်ုပ်နှင့်အဆက်အသွယ်များ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို "like" နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စာပမြေားများသာမက chatting ပေးသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ မှလွဲ၍ မျက်နှာချင်းဆိုင်ကူညီခဲ့သည်။
သင်ဒီလူတွေကိုဖြတ်ပစ်ရမယ် ငါကအဲဒါကိုနောက်တဖန်မသုံးတော့ဘူး (တစ်နေ့ ၁ နာရီ၊ ၂ လုံးဖြတ်တောက်သည်။ ) ကိုငါပိုပြီးအကျိုးရှိရှိအသုံးချပြီးနံရံပေါ်ကပေါ်လာသောမိုက်မဲသောအရာများ၊ သို့မဟုတ်အကောင်းဆုံးနှင့်တိတ်ဆိတ်စွာအော်ဟစ်ခြင်းထက် ပိုမို၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအရာများကိုဖတ်ရှုသည်။ အလိုတော်ထုတ်ဝေနိုင်ပါတယ်။
နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ် .. ပြီးတော့မင်းကို `လူမှုရေးကွန်ရက် 'လို့ခေါ်တဲ့ဒီမုသားကိုသင်စွန့်လွှတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
PS: လူ့အဖွဲ့အစည်းမှလူတစ် ဦး စီသည်၎င်းတို့၏ကွန်ပျူတာများတွင်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကွန်ယက်တစ်ခုတည်းကသာပေါင်းစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
PD2 ။ ။ စာလုံးပေါင်းတောင်းပန်ပါတယ်၊ စာမဖတ်ချင်ပါဘူး။
အသုံးပြုသူ @ gmail
"အခုအချိန်မှာမင်းကိုရေးတဲ့သူကဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရဲ့မကြာခဏအသုံးပြုသူမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သင်ဟာကယ်တင်ခြင်းမခံရသေးသောကလေးမဟုတ်ပါ။ သင်ဟာ" matrix "ထဲမှာရှိနေဆဲပါ။ ကျွန်ုပ်၏ Facebook အနေဖြင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် Facebook မှထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျန်းမာသောဘဝနှင့်ပြည့်ဝသောဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။ မင်္ဂလာပါ။
လာပါ၊ Firefox သည်ပြောရန်အလွန်သန့်ရှင်းသည်မဟုတ်ကြောင်းမေ့နေပါသလား။ https://blog.mozilla.org/blog/2012/12/03/firefox-gets-social-w-facebook/
သူဘာပြောတာလဲ ငါတို့အများစုဟာအင်္ဂလိပ်စာကိုမသိဘူး ...
ပြီးတော့စမတ်ဖုန်းအတွက်တရား ၀ င်အက်ပလီကေးရှင်းတွေအကြောင်းပြောရရင် Pusteblume (Diaspora * အတွက်တရား ၀ င်တရားဝင်မဟုတ်တဲ့ application) ကကြီးမားတဲ့အမှားတစ်ခုရှိတယ်။ log in လုပ်စရာခလုတ်မရှိဘူး၊ ဆက်သွယ်မှုသည် Android မှလူမှုကွန်ယက်ဖြစ်သည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၏ခေါင်းစဉ်သို့ပြန်သွားသောအခါကျွန်ုပ်သည်အဆက်အသွယ်အစုအဝေးသည်အခြားလူမှုရေးကွန်ယက်များဖြစ်သော VK သို့မဟုတ် Diaspora * သို့ ၀ င်ရန်ဝန်မလေးခြင်းကြောင့် (FBdependent) ဖြစ်လာသည်မှာကြာခဲ့ပါပြီ။ Renren မှာရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် Facebook ကနောက်ကလိုက်တာကစိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်။
ကျွန်တော် Facebook ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက်ကသိခဲ့ဖူးပေမယ့်မတတ်နိုင်လောက်အောင်မကောင်းဘူးဆိုတာသိပေမယ့် Pump.io (ယခင် identi.ca) နှင့် Diaspora * တို့၏ကျေးဇူးကြောင့်မြင်ကွင်းကျယ်ကျယ်လာသည်။
ကျွန်ုပ်မသိခဲ့ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းဖုန်းတွင် android ရှိသည့်အချက်အလက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သို့သော်ထို application ကိုကျွန်ုပ်မသုံးပါ
fuck ဆိုတဲ့! Facebook, instagram နှင့် WhatsApp တို့နှင့်ကျေနပ်ရောင့်ရဲခြင်းမရှိတော့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အားကြည့်ရှုရန်ကင်မရာနောက်မှလိုက်ပြီးနောက် sms ကိုဖတ်လိုပြီးဖြစ်သည်။
။ -_- ။
ယခုအချိန်တွင် facebook android app သည်လက်ငင်းစာတိုပေးပို့စနစ်ကို unify လုပ်နိုင်သည်။
တဖကျတှငျ, မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖတ်ရှုဖို့အဆင်ပြေပါတယ်, အဖမ်းခံရနိုင်သူယုတ်ညံ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူရှိပါတယ်။ (ကျွန်ုပ်၏စကားစုကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီး၎င်းကိုရှင်းပြရန်မလိုအပ်ပါ။ )
အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာရွေးချယ်ထားသူနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့သိသည်ကိုသိရခြင်းသည်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အများစုကသူတို့၏ Thong အရောင်ကိုပင်စကားပြောခြင်းဖြင့်ဟားခါးစကားပြောကြသည်။
ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်သန်ဖို့နဲ့မျှော်မှန်းဖို့ဆိုတာရှင်သန်ဖို့လိုတဲ့အတွက်ပါ။ (အချက်များအရပြောရမယ်၊ အများစုပြောရရင် ၅၉% ကငါပြောနေတာကိုနားမလည်ကြဘူး။ 😛)
Facebook (mobile application နှင့် web platform) သည်ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုသည့် web page များကိုလည်းခြေရာခံသည် - FB ကိုယ်တိုင်အတွင်းရှိကျွန်ုပ်တို့ link လုပ်ထားသည့် link များသာမကငါတို့ဖွင့်ထားသောအခြား tabs များ (လူအများစုကဤအကြောင်းကိုသတိမပြုမိ) ။ ကျွန်ုပ်တို့လည်ပတ်နေသောဝက်ဘ်ဆိုက်များအားလုံးတွင်ရှိသည့် tracker အရေအတွက်ကိုသိလိုလျှင် disconnect extension ကို install လုပ်ပါ (https://disconnect.me/disconnect), ခြေရာခံတောင်းဆိုမှုများကို (tracker) ပိတ်ဆို့နှင့်မည်မျှပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏မူလအစသည်အဘယ်အရာကို (ဒီ Google Analytics မှထံမှငြင်းပယ်တောင်းဆိုမှု3ရှိပါတယ်) ကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်ရာ။ ဥပမာ Fox News စာမျက်နှာတွင်ကြော်ငြာလမ်းကြောင်း (၉) ခု၊ ပိတ်ဆို့ခြင်း (comScore မှသရုပ်ခွဲချက်တစ်ခုနှင့် (၄) သည်အသုံးပြုသူများပါဝင်သည့်အပြန်အလှန်ဆန်းစစ်ခြင်း (ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အပါအ ၀ င်) ကိုပိတ်ထားပါ။
အခြားကောင်းသောရွေးစရာများ - adblock plus သည်လူမှုရေးခလုတ်များကိုပိတ်ဆို့သည် (ဥပမာ၊ ကျွန်ုပ်တို့စနစ်တွင်ရှိသည့် FB နှင့် G + cookies များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုသည့်အခြားဆိုက်များ၊ ထိုခလုတ်အနည်းငယ်သာရှိသည့်နေရာများ) နှင့် priv3 + ။ (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/priv3plus/?src=priv3)၊ သင့်ကိုခြေရာခံ။ မရစေရန် third-party cookies များကိုပိတ်ဆို့ထားသည်။
Android အတွက်ငါ Tinfoil ကိုသုံးတယ်။ Facebook ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ "ပုံမှန်" ဘရောင်ဇာထဲမှာတွေ့ရတဲ့စာမျက်နှာတွေကိုမရှာနိုင်အောင် sandbox / virtual environment မှာ mobile site ကိုဖွင့်ပေးတယ် - http://androidlibre.org/content/tinfoil-para-facebook-y-evite-que-rastreen-el-historial-de-navegaci%C3%B3n-cuando-visitamos-la
ငါကဒါကိုတစ်ယောက်ယောက်ကူညီလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ် သူတို့ကတိုက်ခိုက်ပေမယ့်ငါတို့တန်ပြန်တိုက်ခိုက်! (လွယ်ကူသောအရာမှာ FB ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်ဖြစ်သော်လည်းဟေး…)